NATO oo lagu eedeeyey dilka shacab Libyan ah - BBC News Somali
NATO oo lagu eedeeyey dilka shacab Libyan ah
14 Maajo 2012
Image caption Weeraradii NATO ee Libya
Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtey in weerarada gaashaanbuurta NATO ka geysteen Libya sannadkii hore lagu diley ilaa 72 ruux oo rayid ah. Warbixin ay soo saartey hay'adda waxay ku eedeysey isbahaysiga reer galbeedka inay ku guuldareysteen aqoonsiga xaddiga khasaaraha ay geysteen intii ay socdeen ololihii lagu taageerayey ridistii Muammar Gaddafi.
Warbixintan ayaa noqoneysa tii labaad ee nooceeda ee ay soo saarto hay’ad xuquuqda aadanaha qaabilsan bilihii dhowaa, hase yeeshee dhinacyada ay khuseyso weli jawaab kama aaney bixin.
Ururka Human Rights Watch waxaa uu warbixintiisa ku sheegey inuu gaashaanbuurta NATO ka doonayo baaritaan inuu ku sameeyo 72 kiis oo rayid ah, kuwaas oo lagu diley weeraradii cirka ee dhacay xiligii u socdey kacdoonkiiLibyasannadkii tegey.
NATO waxay sheegtey inaysan qaadi karin mas’uuliyadda dhimashada dadkaasi rayidka, waayo xiligaasi ma aaney joogin gudaha dalka si ay u xaqiijiso kiisaskaasi.
Adel Ebsat oo qaraabo la ah saddex dhibanne oo ku dhintey weerar ka dhacay meel ku dhow magaalada Zliten ee bariga dalka, ayaa BBC u sheegey inuu weydiistey dowladdaLibyainay dacwad ku qaado NATO, isla markaana in baaritaan la bilaabo.
Qaar ka mid ah saraakiisha Libya ayaa sheegey in arintan an si faahfaahsan looga wada hadlin, isla markaan aaney weli jirin mowqif ay arintaasi ka qaateen.